Samy miaina amin’ny toerany ny rehetra | NewsMada
Samy miaina amin’ny toerany ny rehetra
Ny itsitokotokoan’ny loha, ny hevitra tsy mitovy! Samy manana ny fandraisany ny zava-miseho eto amin’ny firenena, ankehitriny, ny rehetra. Naharay fitarainana maro mikasika ny fifidianana loholona farany teo, ohatra, ny HCC, saingy nopasopasohina ny fanazavana ka navoaka ofisialy ihany ny voka-pifidianana. Tsy nisy niova ireo lany tamin’ny vokatra vonjimaika. Novonjivonjena maimaika mba hialana amin’ny adihevitra maro ? Misara-kevitra tanteraka ny mpomba ny fitondrana sy ireo « mpanohitra » ny amin’izay. Ho mby aiza ny fiafarany ? Mbola hitohy ny adihevitra eo amin’ireo mpisehatra politika isan-karazany. Samy mba mikendry izay hahazoana toerana e ! Ny izarazarana ny seza, ny fitadiavana fitoniana.
Fitoniana ! Ilain’ny rehetra izany, na mpitondra na ny entina. Saingy ny fisehony no samy hafa. Ny mpitondra, mila fitoniana ara-politika ; ny vahoaka kosa, filaminam-piainana maharitra. Samy miaina amin’ny toerana misy azy ny rehetra e ! Mifampiankina anefa izany : mitsingilahila ny toeran’ny mpitondra raha vao tsy marin-toerana ny ativilanin’ny vahoaka. Ny tsinay mantsy, tsy mba vatsy ary raha noana ny kibo, mivezivezy ny fanahy, koa sao hihalohalo ao an-tsaina ny hanapoaka sarom-bilany. Ny aza misy anie izany. Miovaova manaraka ny vanim-potoana iainana rahateo ny toetry ny andro, noho ny sotasotan’ny olombelona ihany, izay mahatonga loza voajanahary miteraka faharavam-pananana ka vao mainka mahalalina ny fahantrana.
Henjana tokoa ny manjo ireo mponina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy iny. Safo-drano tanteraka ny toeram-ponenana sy ny fihariana ka traboina. Efa tsy mitsidi-baravarana intsony ny rano fa tafakatra am-bovonana. Fa mifanohitra amin’izany ny any amin’ny faritra atsimo. Mikaikaika amin’ny haintany fa kere ny mponina. Ny itoviany, samy tsy manan-kohanina izy ireo ka miandry ny fahatsoram-pon’ny manampahefana isan-tokony sy ny mpiray tanindrazana aminy. Efa misy ny sampandraharaha misahana ny loza voajanahary toy izao ary voavonjy vonjimaika ireo traboina. Fa ny tena ilaina, ny hiarovana azy ireo mandavantaona amin’ny paikady mahomby fa tsy vonjy tavanandro isan-taona toy ny mahazatra. Sa zara aza misy hisehosehoana hoe miasa ? Kibo mitsara tena amin’izay ataony ny rehetra. Misy mantsy ireo mihabe kibo ary ao ireo mitofezaky ny hanoanana.